नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालनमा – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ बिबिध ∕ नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालनमा
नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालनमा
आर्थिक दैनिक २०७७, चैत्र ३ १३:०३
नागरिकलाई आयुर्वेद चिकित्साप्रति आकर्षित गर्न नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवाकेन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको सहयोगमा सोमबारदेखि नियमित सेवा दिने गरी केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो । हराउँदै गएको आयुर्वेद चिकित्सा तथा यसको महत्वबारे बुझाउन समेत केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख डा. सुजाता शर्माले बताइन् । हुप्सेकोट गाउँपालिका–१ मा स्थापना गरिएको केन्द्रबाट नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने शर्माको भनाइ छ ।
केन्द्रबाट आयुर्वेद सेवा, औषधि वितरण सेवा, ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा, स्तनपायी कार्यक्रम, पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, योग, जीवनशैलीलगायत विषयमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने शर्माले जानकारी दिइन् । ‘सैद्धान्तिक हिसाबले आयुर्वेद चिकित्साका प्रमुख दुई उद्देश्य रहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘स्वस्थ व्यक्तिको रक्षा गर्नु र रोगी व्यक्तिको रोग निर्मूल गर्नु नै आयुर्वेदको प्रमुख उद्देश्य हो ।’
परापूर्वकालदेखि आयुर्वेद चिकित्सा अपनाउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय यो चिकित्सा पद्धति ओझेलमा परेको भन्दै डा. शर्माले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिसँग हाम्रो जीवन जोडिएको बताइन् । आयुर्वेदलाई धेरैले उपचार पद्धतिका रुपमा स्वीकार गर्न अन्कनाइरहेका अवस्थामा एलोपेथिक उपचारपछि ठीक नभएका कतिपय बिरामी आयुर्वेदमा पुगेपछि निको हुने गरेको उनले बताइन् । पछिल्लो समय विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीका क्रममा धेरै मानिसले आयुर्वेदको महत्व बुझेका डा. शर्माको भनाइ छ । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई हाम्रो जीवनसँग जोड्दै लैजानसके दीर्घ रोगबाट छुट्कारा पाउन सकिने उनले बताइन् ।
जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापनाका लागि काम थालिएको छ । सो कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले पूर्वीय सभ्यतामा आयुर्वेद विषयवस्तुबारे पहिलेदेखि वर्णन गरिएको बताइन् । स्वस्थ रहनका लागि र रोगी अवस्थामा पनि निरोगी हुने उपायबारे हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा उल्लेख गरिएको पाण्डेले बताइन् । पौराणिककालदेखि नै आयुर्वेद चिकित्साको सबै व्यवस्थापन हुँदै आएको भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आधुनिकतासँग समन्वय गरेर जाँदा पछाडि परिएको उनको भनाइ छ ।